Blog of Nyein Chan Yar: 2010.11
ဖွစေရာ ရှိတဲ့ စာမေးပှဲတှေ အားလုံးပွီးသှားလို့ စိတျခမျြးသာ မလို့ရှိသေးတယျ၊ အိမျကို လူတဈယောကျရောကျလာတယျ။ ယဉျထိနျးရဲရုံးကတဲ့။ ကြှနျတျောက ယဉျတိုကျမှု ရှိတယျတဲ့။ ဘယျ့နှယျဗြာ။ ဘယျကဘယျသူ့ကိုမှ ကြှနျတျော ကားနဲ့ ဝငျမတိုကျဖူးပါဘူး။ အဲဒါနဲ့ တိုငျတဲ့လူကို တှမေ့ယျ ခြိနျးလိုကျလို့ပွောလိုကျရတယျ။
စိတျကတော့တျောတျောညဈသှားတယျ။ အသဲအသနျ စဉျးစားပေါ့ သူပွောတဲ့ အခြိနျ ငါဘယျသှားမိပါလိမျ့ပေါ့။ စဥျးစားကွညျ့မှ သတိရတယျ။ အဲ့ဒီနကေ့ တျောတျောပငျပနျး အဆငျမပွတော မြားတဲ့နပေ့ေါ့။ လမျးအသေးတဈခုကနေ လမျးကွီးပျေါ တကျဖို့ ရပျပွီး ညာဖကျကို ကွညျ့ပွီး ကားအရှငျးကိုစောငျ့နလေိုကျတယျ။ ကားရှငျးတော့ စထှကျလိုကျတယျ။ ထှကျထှကျခငျြး ဘယျဖကျမှာ ရိပျခနဲ မွငျမိလို့ ခကျြခငျြး ဘရိတျအုတျလိုကျတယျ။ ကွညျ့လိုကျတော့ ကားရဲ့ ဘယျဖကျဘေးမှာ မိနျးမတဈယောကျ ဘောနကျပျေါ လကျထေါကျပွီးနရေော။ သွျော... ဆောရီးဆောရီး လို့ လကျပွတောငျးပနျလိုကျတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီ မိနျးမက မကွနေပျပုံနဲ့ ကွညျ့ပွီး ဆကျထှကျသှားတယျ။ (သူ့လကျကလညျး phone ပွောတောငျ မပကျြဘူး။) ဒါလေးပဲ။ ဘာမှလညျး ဖွဈတာမဟုတျဘူး။ နောကျရကျကြ ကြှနျတျောကားနဲ့ သူ့ကို တိုကျသှားပါတယျ ခွထေေါကျတှေ ညိုမဲသှားပါတယျ ဘာညာနဲ့ တိုငျခကျြဖှငျ့တယျတဲ့။ (နောကျဆုံးတော့ လြှျောကွေး ငါးသောငျး တောငျးပါတယျ။)
အံ့သွတယျ။ စိတျပကျြတယျ။ ဘာလို့ ဘာမဟုတျတာကို ပုံကွီးခြဲ့ လြှျောကွေး တောငျးခငျြရတာလဲ။ အဲ့သလောကျ စိတျဓာတျ အောကျတနျးကရြတာလဲ။ အဲ့သလိုလူတှေ... စိတျကုနျလှနျးလို့ ဘာပွောရမှနျးတောငျ မသိတော့ဘူး။ သူ့ခွသေလုံးကို လှနျပွသေးတယျ။ သူ့ chinese ခွသေလုံးက ဖွူနတောပဲ။ ဘာဒါဏျရာမှ မတှဘေူ့။ ဘာမှ မငွငျးလိုကျတော့ပါဘူး ပွသနာ မရှညျခငျြတော့လို့။ အဲ့ဒီမိနျးမက ပွောသေးတယျ။ ကြှနျတျောက ကားပျေါက ဆငျးပွီး မတောငျးပနျလို့တဲ။ ဘာမှမဖွဈတာသိနတောကွီးပဲ။ ကားပျေါကလှမျးတောငျးပနျပွီးပွီပဲ။ ကားကဖွငျ့ ရှသှေ့ားတာ တဈပမေပွညျ့သေးဘူး။ ဘာဖွဈစရာရှိရမှာလဲ။ ကိုယျကိုယျတိုငျဆိုလညျး လမျးလြှောကျရငျလညျး သခြောမရှောငျမိရငျ ကားက ပှတျသှားတာမြိုးတှေ ကွုံခဲ့ ဖူးပါတယျ။ ဆငျးမတောငျးပနျရကောငျးလားလို့ မတှေးခဲ့ဘူး။ အခု အဲ့ဒီမိနျးမကတော့ အခုလို ဒုက်ခပေးလိုကျရ လြှျောကွေး တောငျးလိုကျရတာကို လိပျပွာလုံသလား မသိပါဘူး။ လူဆိုတာ ကိုယျ့သမိုငျး ကိုယျရေးတာပဲလေ။
ကိုယျကိုယျတိုငျက တော့ ကားမောငျးရငျ ဘယျတော့မဆို လမျးလြှောကျတဲ့သူတှကေို ဂရုစိုကျခဲ့တယျ။ မဉျြးကွားမှာဆိုလညျး အမွဲ လူကူးနရေငျ အရှိနျလြှောတယျ ရပျပေးတယျ။ ရနျကုနျမှာ ကားတှေ မဉျြးကွားမှာ ရပျပေးတယျဆိုတာ ရှားပါတယျ။ ဒီလို အမွဲ ဂရုစိုကျ ခဲ့ပမေယျ့လညျး ဒီလို အစှတျစှဲခံ လိုကျရတာတော့ ရငျနာမိတယျ။ ရဲကလညျး အားတကျသရောပဲ။ သူလညျး အမှုရမှ ငှရေတာကိုး။ သူကလညျး ငါးသောငျးလောကျတောငျးတယျ။ ရဲအကွေားငျးတော့ အထူးအဆနျး မဟုတျလို့ မပွောတော့ဘူ။
စိတျဓာတျနိမျ့ကတြဲ့ လူတှနေဲ့ ကွုံရတာ ကံဆိုးလို့ လို့ပဲ သဘောထားပါတယျ။ တကယျကို ကံဆိုးနတေယျ။ ဒီနဆေို့ လကျဖကျရညျဆိုငျမှာ ထိုငျနရေငျး ခုံကွိုးကတြယျ။ လကျထဲကိုငျထားတဲ့ camera တောငျနဲနဲ ပိနျ့သှားတယျ။ (PS: အကျနတေဲ့ခုံကိုသုံးတဲ့ ဆိုငျရှငျကိုလညျး ဘာမှ မကွမေနပျ မပွောခဲ့ပါဘူး။ နာသှားတဲ့ခါးအတှကျ၊ ပိနျ့သှားတဲ့ camera အတှကျ လြှျောကွေးမတောငျးပါဘူး။ မတျောတဆ ဖွဈတာပဲ။) (အခုမှသတိရလို့ ထညျ့ရေးလိုကျတာ။)
Posted by dathana at Monday, November 29, 2010 No comments:
Labels: ho-ho-d-d, misc
Posted by dathana at Wednesday, November 24, 2010 No comments:
We, the people of Burma, were very happy for aunty Suu was released. Everybody was waiting for her release since Friday. But she was released in the evening of Saturday (2010-11-13-17:15). We love her so much that we regard her asamother of Burma. Like the children missed their mother who was away for 7.5 years, we all want to see her very much.
I went to NLD head office today to listen to the speech of aunty Suu. Although I reached there exactly at 12 o'clock, I learnt that I was so late, there wasahuge crowd. But, I could manage to reach to the opposite side of the road which is exactly facing to NLD office. Even from there, I could not hear or see her at all. All the people wanted to see her and hear her voice. it was very stuffy in the crowd. But I think there must be more than thirty thousand of people waiting for her speech.
I could take picture like this only today, very far :(
Following picture is from Mizzima news.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းဟောပြောပွဲ ရုပ်သံသတင်း
After seeing some photos of the crowd taken by journalists, my estimation that thirty thousand people audience was wrong. Some news agency said, there must be around 100 thousand of people came to the speech of aunty Suu.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြည်သူများသို့ မိနစ် ၅၀ ခန့် မိန့်ခွန်းပြော ရာတွင် အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ပြောကြား
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ၇နှစ်နှင့် ၆လကြာ ဆက်တိုက် ထိန်းသိမ်းခံထားရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်ပြီ
Posted by dathana at Sunday, November 14, 2010 No comments:
Posted by dathana at Thursday, November 11, 2010 No comments:
Speech of Waihnin Pwint Thon at Labour Party conference
Facts About 2008 Constitution
Two hearts believing in just one mind (zg)
Two hearts believing in just one mind (Unicode)
Posted by dathana at Wednesday, November 10, 2010 No comments:
I feel nothing from this election result. Because, we already knew what SPDC was doing. That's the reason why we boycotted this election and didn't go to vote.
But I want to talk about some shameless frauds done by SPDC. Most of the fresh results from Yangon polling stations showed many winners from some pro-democracy parties such as NDF. But, the next morning (Nov 8), the winner list becomes candidates from USDP. They said Nov7evening results did not include pre-election votes. Those pre-election votes actually were taken from many government employees who were supposed to vote USDP in front of them. There were lots of rejected votes too.
The SPDC has planned very well for this election not to happen the same situations like 1990 election. They had well planned to get all the seats in Parliament. They may have many backup plans like, plan b, plan c and so on.
Actually, SPDC had already set up their position in 2008 National Constitution. The highest power in new government will be "the security council" which is lead by the chief of the army. He holds almost all the decisions for government. Some of the ministers will be appointed by him. He has right to declare martial law. All the armed forces including police and MI will be under his control. The civil government will have no right to manage army. And 25% of Parliament will be from Army who are not elected by the people. To changealaw, at least 75% of parliament votes will be needed. There will be different court for army. President will be someone who has military experience. Even President is required to get approval from chief of the army to sign some decisions. These are some catches I know from the 2008 constitution which gave Army the ultimate power.
So, you know, they have already controlled all the power of new government according to the new constitution. But still, they want to get all the seats of parliament too. The new civil government will now be USDP which actually isaparty comprised of former army generals.
Now, the new government will be the combination of "security council" and so-called civil government from USDP. Welcome to the new form of dictatorship.
Cartoon by Awpikyae APK
NDF: National Democratic Front
SPDC: State Peace and Development Council (Than Shwe’s régime )
USDP: Union Solidarity and Development Party (Than Shwe’s party)
Labels: Burma, commentary, election, English_posts, freedom, Myanmar
ရောက်တတ်ရာရာ ပြောချင်တာလေးတွေ ရှိတယ်။ ပထမဆုံး ပြောချင်တာက အလံကိစ္စ။ facebook မှာတော့ လူတကာက အလံပြောင်းတာကို ပြောကြ ဆိုကြတယ်။ နအဖက ဒီ့ထက်ဆိုးရွားတာတွေ လုပ်လာတာ ဘာမှ ဒီလောက် မပြောခဲ့ကြပဲ ဒီအလံပြောင်းတာကိုမှ ဒီလောက်ပြောကြတာကို နားမလည်နိုင်ဘူး။ ဥပမာ - ၈၈ကျောင်းသားတွေကို ထောင်၆၅နှစ် ချတုန်းက လူတွေ ဒီလောက်တောင် မပြောခဲ့ကြဘူး။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ကတော့ ဒီအလံပြောင်းမှာဆိုတာ ဟိုးအရင်ကတည်းက သိနေတာပဲ။ သူတို့ အခြေခံဥပဒေမှာ ထည့်ထားတာပဲ။ ဆိုးရွားတဲ့ အခြေခံဥပဒေ ကိုကြတော့ ဒီလောက် မကန့်ကွက်ခဲ့ကြပဲနဲ့။
ပြောစရာဆိုလို့ အလံပြောင်းတာတောင် ယတြာအရပြောင်းတယ်ဆိုတာပဲ။ ၂၁ရက် ၃နာရီ မှာ အင်္ဂါသားက အလံချ၊ မီးရှို့ မြေမြုတ်၊ ဗုဒဟူးသားက အလံတင် ဆိုတာကို အရှက်မရှိတဲ့ "နိုင်ငံတော်" ဆိုသူတွေက လုပ်တာကိုပါပဲ။ (နအဖက သူတို့ကိုသူတို့ နိုင်ငံတော်လို့ ခေါ်သဗျ။) အလံဟောင်းကိုတော့ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ဘယ်တုန်းကမှ မချစ်ခဲ့ဖူးဘူး။ ၈၈ တုန်းကဆိုလည်း မဆလအလံကို ဘယ်သူမှ မလိုလားကြလို့ ကြယ်၅ပွင့်နဲ့ အလံကို လွှင့်ခဲ့ကြတယ်။ မဆလ အလံက စပါးနှံတွေ ဘာတွေရော။ စပါးဘယ်နှစေ့ ပါလည်း မသိဘူး။ မသိတဲ့သူပဲများပါတယ်။ ထားပါတော့။ ဘာမှမကောင်းဘူး စိတ်ပျက်တယ်။
နောက်တစ်ခုက ရွေးကောက်ပွဲ။ ပြည်သူလူထုအတွက်ကတော့ dilemmaပဲ။ မဲထည့်ထည့် မထည့်ထည့် စစ်ကျွန်ဖြစ်မှာပဲ။ ဒီမိုကရေစီ ဘက်သားပါတီ လို့ဆိုတာတွေကလည်း ဘာမှ အားကိုးစရာ မရှိဘူး။ NDF ဆို - ခမေါက်ဟာ NLD ရဲ့ တံဆိတ်မဟုတ်ဘူး လို့လည်း ညာတယ်။ DASSK ဟာသူတို့ ခေါင်းဆောင် လို့လည်း ညာတယ်။
ဒီရက်ပိုင်း fb မှာ လူတော်တော်များများက ပြည်ပ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေကို မကောင်းမြင်တာ များလာကြတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ပြည်တွင်းမှာနေတာပါပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်ပက အဖွဲ့တွေ တတ်နိုင်သလောက် ဘယ်အတိုင်းအတာထိ လုပ်နိုင် လုပ်နိုင် ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ ဒီအဖွဲ့တွေထဲမှာ ကိုယ်ကြိုးရှာ အကြံအဖန်သမားလည်း နဲနဲတော့ ရှိချင် ရှိမှာပဲပေါ့။ သိပါတယ်။ (ကျွန်တော် London သွားတုန်းကကြုံဖူးတယ်- တစ်ချို့တွေ ဆန္ဒပြပွဲရှိရင် ပုံမှန်သွားတယ်။ asylum approve ဖြစ်အောင်လို့ပါတဲ့။ ) အဲတော့ ဒီလို ငါးခုံးမတချို့ကြောင့် တစ်လှေလုံး အပုတ်ချည့်ပဲလို့တော့ မပြောသင့်ဘူး။ ကျွန်တော်က ပြည်ပကလူတွေကို ကာကွယ်ပြီး ငြင်းတော့ ကျွန်တော့်ကိုပါ ပြည်ပကလို့ ထင်ကြတယ်။ လူတွေ လူတွေ ... နအဖ ၀ါဒမှိုင်းတွေ မိနေသလားမသိဘူး။
တချို့တွေက --- နအဖရဲ့ နိုင်ငံ့စီပွားရေးကို ချုပ်ကိုင်နေတာ။ Gas တွေရောင်း။ သစ်တွေ ခုတ်ရောင်း။ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ကို ဖျက်ဆီး။ ရတဲ့ဝင်ငွေကို စစ်အသုံးစရိတ်နဲ့ ကိုယ့်ပိုင်ဝင်ငွေအဖြစ်သုံးပစ်တာ။ လျှပ်စစ်မီး လုံလောက်အောင် မပေးတာ။ ပြည်သူလူထု ကျန်းမာရေး။ ပညာရေးအတွက် ဘာမှ မလုပ်ပဲ စုတ်ပြတ်သတ်နေအောင် ထားတာ။ နိုင်ငံ တိုးတက်အောင် ဘာမှမလုပ်တာ။ နိုင်ငံ့ စီးပွားရေးကို သူတို့ လူတစ်သိုက်ပဲ လက်ဝါးကြီးအုပ် လုပ်ကိုင်နေတာ ... စတာ စတာတွေကို မမြင်နိုင်ကြဘူး။ နွားခြေရာခွက်ထဲက ဖားသူငယ်တွေလိုပဲ ပြောဆိုနေကြတယ်။ သူတို့ ဆိုလိုတာက နိုင်ငံ့အရေး လှုပ်ရှားသူတွေကပဲ နိုင်ငံကြီး မတိုးတက်အောင် ကဖျက်ကရက် လုပ်နေသယောင် ပြောနေကြတယ်။ နအဖ ၀ါဒမှိုင်းတွေ မိနေသလားမသိဘူး။ ၀မ်းနည်းဖို့ ကောင်းတယ်။ နိုင်ငံ့အရေး လုပ်လို့ နှစ်ရှည်ထောင်ကျ ခံနေရသူတွေ၊ စစ်ကြောရေးမှာ အနှိပ်စက်ခံရသူတွေ၊ အသက်ပေးသွား သူတွေဟာ ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံး အတွက် ပေးဆပ်နေကြတယ် ဆိုတာ နားမလည်ကြတာလား။ တကယ် ၀မ်းနည်းဖို့ ကောင်းတယ်။
နောက်တစ်ခု ၀မ်းနည်းဖို့ ကောင်းတာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာသာရေး အမြင်ကျဉ်းမြောင်းသူ တော်တော်များနေတာပါပဲ။ ဟိုတလောက ဝေနှင်းပွင့်သုန် အကြောင်း ပြောကြဆိုကြတော့။ ဝေနှင်းပွင့်သုန် ဟာ အစ္စလမ် ဘာသာဝင်မို့လို့ ဆိုပြီး ဆိုးဆိုးရွားရွား ပြောလာကြတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပြည်တွင်းနေသူတွေထဲမှာ ဘာသာရေး အမြင်ကျဉ်းမြောင်းသူများပြီး၊ ပြည်ပမှာနေသူတွေက အမြင်ကျယ်တာ၊ မျှတမှုရှိတာကို တွေ့ရတယ်။ ဟိုတခါက RFA မှာ ဆောင်းပါးတစ်ပုတ် နားထောင်ဖူးတာလေး ပြောရရင် ... အာဏာရှင် အစိုးရတွေဟာ ပြည်သူတွေကို ဘာသာခြား မုန်းတီးတဲ့စိတ် နိုင်ငံခြားသား မုန်းတီးတဲ့စိတ် သွတ်သွင်းပြီး အစွန်းရောက် အမျိုးသားရေး ၀ါဒကို ရိုက်သွင်းထားလေ့ ရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ။ နအဖဆိုလည်း နိုင်ငံရေး အာရုံပြောင်းဖို့ လိုအပ်ရင် ကုလားဗမာ အဓိကရုဏ်း ဖြစ်အောင် ဖန်တီးတာ သူတို့ လက်သုံးပါပဲ။ အဲ့ဒါပါပဲ။ နိုင်ငံကို ချစ်တတ်တာနဲ့ အစွန်းရောက် အမျိုးသားရေး ၀ါဒကို ခွဲခြားတတ်ကြပါစေ။
Against the Army (II) http://dathana.byethost3.com/2010/07/against-the-army-ii-zg1/
Against the Army (I) http://dathana.byethost3.com/2010/06/against-the-army-i-z/
Posted by dathana at Tuesday, November 02, 2010 No comments:
Labels: Burma, commentary, ho-ho-d-d, Myanmar, Thoughts